Gemhet Bush Style Machetes dia malaza ary karazana machete amidy indrindra eran'izao tontolo izao. Machete misy tanjona rehetra miaraka amina volo mahitsy sy miverina mahitsy. Ny lelany dia mazàna mandanjalanja sy mitombina. Tena mora entina, azo apetaka amin'ny sarony mora entina mandehandeha.
Somary miolaka ny lelany, misy lavaka eo amin'ny tendrony hahantona. Ny any ambadiky ny ravina dia fisaka. Ny fananganana tang feno dia mifarana amin'ny lohan'ny tang vita mivoaka, miaraka amin'ny lavaka amin'ny fehin-tànana. Izy io dia mampiasa SAE1070 vy maranitra avo lela izay feno famonoana antsy amin'ny 800degree sy tempering. Ny ravina dia manambatra ny hamafiny (HRC45-55) sy ny fahalalahana ary ny hamafiny. Mahazo ny kalitao tsara indrindra rehefa manapaka sy mikapa tsara. Ny machete dia manana lelany maranitra izay tsara indrindra amin'ny fanapahana sy fanapahana
Misy karazana halavam-bolo atolotry ny mpanamboatra machete. Manomboka amin'ny 12 santimetatra izany ary afaka 24 santimetatra na mihoatra. Zava-dehibe tokoa ny hamaritana ny halavan'ny lelany arakaraka ny filanao alohan'ny handoavana izany. Ny machete lava lava dia afaka miasa tsara amin'ny fanadiovana borosy satria ny halavany dia miaro ny tanana amin'ny ratra.
Marika Gemlight na OEM / ODM Blade Style voaroy
Halavan'ny lelany 10 hatramin'ny 26inch Halava tanteraka miparitaka
Blade Material Tavoahangy vy avo karbaona miaraka amin'ny Mn Enhanced / SAE1070 Fitsaboana hafanana matevina Famonoana sy famonoana Blade feno
Hamafin'ny Blade HRC45-55 Tang feno ENY
Volom-bolo Groove 3 tsipika Blade Edge Type Voarara mialoha
Fitsaboana ambonin'ny tany Voalamina tsara na voadio Blade mifono Fiarovana ambonin'ny Gemlight Special Anti-harafesina menaka nopetahany takelaka
Hatevin'ny lelam-bolo Tanana ambony: 2.0mmAt Soso-kevitra: 2.0mm na OEM Blade Detail Fanaingoana voalohany natao tao amin'ny orinasa
Fitaovana fikirakira Rivet Mitantana fitaovana Hazo na plastika
Firenena nihaviana Shina Vondrona lava 10inch etsy ambony
Io no tsara sy ampiasaina amin'ny toeram-pambolena sy fiompiana toy ny voanio, akondro ary voankazo hafa. Izy io koa no antsy tsara indrindra ho an'ny olona any ivelany any anaty ala sy toerana an'efitra hikapohana ny làlan'ny ala mikitroka.
Fonosana sy serivisy
Ny fonosana dia amin'ny 60 pcs / ctn, ny antsy tsirairay amin'ny kitapo plastika iray, avy eo 5 dozra isaky ny boaty misy taratasy anti-hamandoana.
Fonosana araka ny takinao. Manome koa izahay
Fonosana fivarotana antsinjarany
Karatra mihantona plastika / Karatra taratasy / kitapo PVC / Blister
Miaraka amin'i Sheath
Carvas / Cordura Nyon / Nylon tokana
Mifandraisa aminay anio raha mila Katalaogy ary misy fitaovana bebe kokoa!
Teo aloha: Hot tariby nandrisika nandrisika
Manaraka: antsy antsy
Eletro tariby nandrisika